विदेशीहरूको यौन प्यासको लागि शिविरबाटै बेचिन्छन् रोहिंग्या किशोरी | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति १८ चैत्र २०७४, आईतवार १४:०० लेखक नेपालीजनता
रोहिंग्या समुदायका किशोरीलाई विदेशीहरूको यौन प्यास मेट्ने साधन बनाइएको छ
बंगलादेशका विभिन्न शरणार्थी शिविरमा रहेका म्यानमारका किशोरीहरूलाई देहव्यापार गर्न बाध्य पारिएको खुलासा भएको छ । बिबिसीले गरेको एक अनुसन्धानले सो खुलासा गरेको हो । म्यानमारको द्वन्द्वका कारण देश छोड्न बाध्य रोहिंग्या समुदायका किशोरीहरूलाई विदेशीहरूको यौन प्यास मेट्ने साधन बनाइएको सो अनुसन्धानमा देखाइएको छ ।
अनवारा १४ वर्षकी भइन् । म्यानमारको हिंसामा दुवै बाबु–आमा गुमाएपछि बेसहारा बनेकी उनी आफन्तसँग केही महिनाअघि बंगलादेश पुगेकी थिइन् । सहयोगको खोजीमा बंगलादेशका सडकमा भौँतारिएकी उनी नाटकीय ढंगमा बेचिइन् । उनलाई व्यस्त कोक्स बजारबाट अपहरण गरी कोठीमा पुर्याएको थियो । नयाँ जीवनको आशा देखाउँदै भ्यानभित्र कोचेर उनलाई वेश्यावृत्ति गर्न बाध्य पारिएको थियो । ‘अपहरणको केही बेरमै पुरुषहरूले निर्घात कुटेर बलात्कार गरे । उनीहरूले जबर्जस्ती यौन दुव्र्यवहार गरे,’ उनी भन्छिन् ।
शरणार्थी शिविरका रोहिंग्या शरणार्थीको तस्कर अहिले सामान्य बनेको छ । तस्करहरूले शिविरका महिला र किशोरीलाई मुख्य निसाना बनाएका छन् । तस्करहरूले विभिन्न प्रलोभन देखाएर किशोरीलाई देहव्यापार गर्न बाध्य पारेका छन् । राजधानी ढाका र विदेशमा घरेलु कामदार, होटेलको कर्मचारी र किचेनमा काम लगाइदिने बहानामा यौन दुव्र्यवहार भइरहेको अध्ययनमा देखाइएको छ । शिविरको अस्तव्यस्तताका कारण तस्करहरूको बिगबिगी बढेको बताइन्छ । शिविरमा पीडादायी जीवन बिताएका रोहिंग्यालाई झुटा आश्वासन देखाएर तस्करहरूले यौनधन्दा तीव्र पारेका छन् ।
कोठीबाट दातृ संस्थाले हालै उद्धार गरेकी १४ वर्षीया मसुदा भन्छिन्, ‘काम लगाइदिने बहानामा मलाई एक महिलाले यौनकार्यमा लगाएकी थिइन् । रोहिंग्या समुदायकै भएकाले ती महिलामाथि विश्वास लागेको थियो, तर उनले कोठीमा पुर्याइदिइन् ।’ उनले आफूमाथि म्यानमारमा सेनाले यौन दुव्र्यवहार गरेको बताइन् ‘मेरो परिवार म्यानमारको युद्धमा बेपत्ता हुनुभयो । मसँग पैसा थिएन । मलाई म्यानमारमा पनि बलात्कार गरिएको थियो,’ उनले थपिन् ।
बाँके । ४३ डिग्रीको तापक्रम अनि शरीर नै पोल्ने गरी चलिरहेको तातो हावा (लु) मा बाँकेका मुस्लिम समुदायका महिला–पुरुष…
फेसबुकमा #BFF आतंक ! के हो वास्तविकता ? थाहा पाउनुस् !
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यतिबेला आतंक छ । पक्कै पनि यदि…
चर्काे गर्मीमा प्रहरीलाई ज्याकेट !
काठमाडौं । यसवर्ष माइनस २० डिग्री सेल्सियस तापक्रमसम्मको कठ्यांग्रिने जाडोमा बस्न बाध्य प्रहरीले वैशाखको चर्काे गर्मीमा मात्र ज्याकेट पाउने…
ट्राफिक प्रहरीसंग घुस लिनेको कनेक्सन
पोखरा । सवारी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बितरणमा यातायात कार्यालय र कास्की ट्राफिक प्रहरीको सेटिङ हुने गरेको छ ।